3FB : nahavory olona marobe ny fandevenana an-dRafaly Be | NewsMada
3FB : nahavory olona marobe ny fandevenana an-dRafaly Be
Omaly no nanaovana ny fandevenana an-dRasedinah Jean-André (Faly Be), mpilalaon’ny 3FB sady nandrafitra ny Makis de Madagascar. Tonga nanome voninahitra azy avokoa ireo tapaka sy namana, ary indrindra fa ireo izay niaraka nilalao taminy, fahiny. Nisy mihitsy aza ireo mipetraka ivelan’Antananarivo, nanatrika sy nanao veloma farany an’i Faly Be. Ankoatra izay, teo koa ireo filohana klioba sy ny seksiona ary ny ligy sy ny federasiona. Tsy nanao ambanin-javatra ihany koa, ireo mpitsara sy ny mpanazatra.
Nampihetsi-po ny fanaovam-beloma an’i Faly Be, satria niarahana niredona ireo hira fanao tao amin’ny ekipam-pirenena sy tany anaty ekipa. Nataon’ireo mpilalaon’ny 3FB ihany koa ny “hakka”, mahazatra azy.
Tomefy olona ny arabe rehetra nolalovan’ny tranovorona, nanomboka teo amin’ny toeram-piasany eo amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana eo Tsaralalàna, izay niaingan’ny razana sy teny amin’ny eglizy katolika eny Isotry, izay nanaovana ny fotoam-pivavahana ary hatreny Itaosy, izay nanitrihana azy. Tsara levenana ny maty, heni-kaja ny vady aman-janany sy ny tontolon’ny rugby, iray manontolo. Teny iray no noredonin’ny rehetra dia ny hoe “Mandria am-piadanana Rafaly Be”.